Ungayibona kanjani iphesenti lebhethri ku-iPhone X | Izindaba ze-IPhone
UJordi Gimenez | | I-iPhone X
"I-notch" ye-iPhone X entsha ngokungangabazeki yinto engenakugwenywa njengoba ihlala amakhamera nezinzwa zedivayisi kabili, lokhu kuyinto engangabazeki ukuthi ikhawulela ukuboniswa kwezithonjana esinazo phezulu kwesikrini futhi esimweni yebhethri etholakala ohlangothini lwesokunene iyasivumela bona kuphela isithonjana se- «isitaki» ngaphandle kwephesenti ngezinombolo.
Ngakho-ke sibheka izindlela okufanele sikwazi ngazo ukubona lesi sibalo futhi okuwukuphela kwayo okukhona akujwayelekile ku-iPhone. Futhi ngokuvamile inketho esinayo esebenzayo kuwo wonke ama-iPhones ngaphandle kwemodeli yesikhumbuzo se-XNUMXth ukufinyelela Amasethingi> Ibhethri bese wenza kusebenze amaphesenti ebhethri, inombolo ivela esibukweni futhi yilokho kuphela. Endabeni ye-iPhone X lokhu akunakwenzeka ngenxa yesikhala esilinganiselwe, kepha lesi sibalo singasibona ngokushesha futhi kalula.
Ungayibona kanjani le phesenti yebhethri ku-iPhone X
Yebo, ukubona amaphesenti ebhethri kula ma-iPhone X amasha kulula njengokufinyelela ku-Control Center. Okwakho kufanele nje uswayiphele phansi usuke ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini ngenhla nje kwesithonjana sebhethri namaphesenti woqobo webhethri asele azovela ezibalweni. Asidingi ukwenza noma yini isebenze, kusuka esikhungweni sethu sokulawula.
Lokhu kunjalo futhi akubonakali sengathi kuzoshintsha kungekudala, kepha asinqumi ukuthi i-Apple izokwengeza noma icabange ukufaka ngqo amathuba okuthi shintsha isithonjana sebhethri siye kusithonjana sephesenti. Mhlawumbe ngokuqhekeka kwejele lokhu kungenzeka, kepha ngokomthetho sakulahla lokho okwasinika iminyaka eminingi kangaka edlule.
Isizathu sokuthi kungani singenayo inketho yokwengeza zombili izithonjana ngasikhathi sinye kusobala: ukuntuleka kwendawo ebonakalayo. Futhi ukuthi isikrini se-Apple flagship esisha sinale thebhu ebizwa nge-notch evimbela ukungeza izithonjana njengaku-iPhone 8, 7, njll. Noma kunini lapho sifuna ukubona iphesenti, kuzofanele ukuthi sifinyelele ku-Control Center.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » I-iPhone X » Ungayibona kanjani iphesenti lebhethri ku-iPhone X
I-iPhone X itholakala emazweni amasha ayi-14 aqala ngoNovemba 23
Ingabe ukwenziwa kusebenze kwe-iCloud kuyekisiwe ku-iOS 11.1? Kubukeka sengathi kunjalo